समाचार - २०२० यस्तै विशेष वर्ष हो, COVID-१ the वर्षको शुरू देखि विश्वभर फैलदैछ
अप्रत्याशित रूपमा, २०२० यस्तो विशेष वर्ष हो, COVID-१ the वर्षको शुरू देखि विश्वभर फैलदैछ। सबै चिनियाँहरू असाधारण शान्त वसन्त उत्सवमा बाँचिरहेका थिए, खानेकुरा खाँदै थिएन, किनमेल गर्नुभएन, साथीहरूसँग भेट भएनन् र आफन्तहरूलाई भेट्न आएनन्। यो पहिले भन्दा धेरै फरक छ！
चिनियाँ सरकारलाई धन्यवाद, यो प्रसार राम्रोसँग नियन्त्रण गरिएको थियो, एक पछि अर्को कारखाना खुल्यो।
हामी घरमा छँदा धेरै चिन्तित थियौं, किनकि हामीले वसन्त चाडभन्दा ठीक अघि कडा डेलिभरीको साथ एउटा ठूलो प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरेका थियौं। जे होस् भाइरस अप्रत्याशित रूपमा छ, हामी कुनै पनि कारणले ढिला हुन मनपर्दैन। त्यस दिनदेखि जब हामी काम शुरू गर्दछौं, सबै कर्मचारीहरू सँगै धेरै कडा परिश्रम गर्छन्, डेलिभरी समयसँग समात्नका लागि प्रत्येक दिन बढी काम गरे।
अन्तमा, हामीले पहिलो लट समाप्त गरे, 4pcs ड्रमहरू बाहिर पठाउन तयार छन्। हेर! तिनीहरू कति सुन्दर छन्! सबै स्ट्यामिना स्टाफको गर्वको जस्तै सुनहरी चमकको साथ साझेदारी गर्दै! हाम्रो ग्राहक पनि यसको बारेमा सुन्न धेरै खुसी छन्, QC रिपोर्टले देखाउँदछ कि सबै प्यारामिटरहरू योग्य छन्, उनीहरूलाई एक महिनामा प्राप्त गर्न सकिन्छ, कति रमाईलो! त्यहाँ अझै 50० पीसी भन्दा बढि काम सकिएको छ, र COVID-१ still ले अझै हामीलाई प्रभाव पार्दछ, हाम्रा कामदारहरू पर्याप्त छैनन्, धेरै कामदारहरूले कुनै खतराबाट बच्न छुट्टीको दिनदेखि आफ्नो घर छोड्न सकेनन्। तर हामी धेरै विश्वस्त छौं, उच्च क्षमताको असेंब्ली बनाउन हामी प्रभावशाली जिगहरू डिजाइन गर्दछौं, सबै प्रक्रियाहरू सहज र कुशल छन्। हाम्रा कामदारहरू दिनदिनै अचाक्ली काम गरे पनि थकित महसुस गर्दैनन्, कम्पनीले पनि कामदारहरूलाई बढी आरामदायक वातावरण दिन, स्वादिष्ट पकवान र ब्रेक कफी र स्नैक्स प्रदान गर्न भरसक कोसिस गर्दछ।
फेरि सही ड्रममा हेर्नुहोस्, तिनीहरू शून्य दोषका छन्। टीम कत्ति कडा छ! यो यति भरपर्दो र कुशल छ, तपाईंको विश्वासको योग्य!